खेलकुद - Recent Nepal News
खेल जीवनपछि खेतीपाती र गाईपालनमा सक्रिय भारतीय क्रिकेटका पुर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी !
February 16, 2021 adminLeaveaComment on खेल जीवनपछि खेतीपाती र गाईपालनमा सक्रिय भारतीय क्रिकेटका पुर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी !
एजेन्सी – भारतका चर्चित क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनी खेल जीवन बाट सन्यास लिएपछि कृषिमा लागेका छन् । धोनीको हालैमात्र स्ट्राबेरी खाँदै गरेको फोटो भाइरल भएको थियो जुन उनको आफ्नै फार्ममा उब्जाइएको स्ट्राबेरी थियो, जुन ४३ एकडमा फैलिएको छ। उनको खेतमा स्ट्राबेरी, भुईँकटहर, सरिफा, प्याज, गोलभेँडा, लौका, केराउ, अम्बा, मेवा लगाइएको छ । यसका साथै तरबुजा, […]
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको टिमलाई एन्फाले हरायो !
February 12, 2021 adminLeaveaComment on मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको टिमलाई एन्फाले हरायो !
सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारको आफ्नो स्थापना दिवसको अवसर पारेर फुटबलमा प्रतियोगिता सञ्चालन गरिएको छ । शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा भएको मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगितामा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कप्तानीमा रहेको टिमले लज्जास्पद हार बेहोरेको छ । शाहीको कप्तानीमा रहेको कर्णाली–११ लाई एन्फा–११ ले हराउँदै आफ्नो र्वचश्व कायम गर्यो । एन्फाले कर्णाली सरकारविरुद्ध पेनाल्टीमार्फत दुई गोल अन्तरले पराजित गरेको […]
आईपीएलको दिल्ली क्यापिटल टिमबाट फुकुवा भए सन्दीप लामिछाने !
January 20, 2021 January 20, 2021 adminLeaveaComment on आईपीएलको दिल्ली क्यापिटल टिमबाट फुकुवा भए सन्दीप लामिछाने !
काठमाडौं – नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टोली दिल्ली क्यापिटलले फुकुवा गरेको छ। बुधबार दिल्लीले सन्दीपसहित आधा दर्जन खेलाडीलाई रिलिज गरेको हो । सन् २०१७ मा दिल्लीले सन्दीपलाई आफ्नो टोलीमा आवद्व गरेको थियो। उनी आईपीएल खेल्ने पहिलो नेपमली खेलाडी हुन्। त्यतिमात्र होइन आईपीएलले उनको करियरको ग्राफलाई उचो पारेको थियो। केही महिना […]
January 12, 2021 adminLeaveaComment on विश्वका ९३ देशलाई पछी पार्दै म्याराथुन मा सुनमाया बुढा नेपालको झण्डा फहराउँदै भइन प्रथम !
काठमाडौँ – चीनमा सम्पन्न माउन्ट गोवालिगोङ अल्ट्रा (टीएचटी) ५५ किलोमिटर म्याराथनमा नेपालकी सुनमाया बुढा विभिन्न राष्ट्रका दुई सय ९३ जना धावकको सहभागिता रहेको उक्त म्याराथनमा उनी पहिलो भएकी हुन् । उनले ५५ किलोमिटरको निर्धारित दूरी पाँच घन्टा ४४ मिनेट १९ सेकेन्डमा पूरा गरिन् । अल्ट्रा म्याराथन नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान सुरु भएको थियो । म्याराथन […]
पिसिएल : सन्दिप लामिछानेको नाम विश्कै सर्वाधिक महंगा खेलाडीको श्रेणीमा !
January 7, 2021 January 7, 2021 adminLeaveaComment on पिसिएल : सन्दिप लामिछानेको नाम विश्कै सर्वाधिक महंगा खेलाडीको श्रेणीमा !
काठमाडौं – नेपाली क्रिकेटर सन्दिप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिगको आगामी संस्करणका लागि ड्राफ्टमा परेका छन् । उनी यसपटक प्लाटिनम वर्गमा परेका छन्। यो वर्गमा क्रिस गेल, मोइन अली, कोलिन इन्ग्राम, इमरान ताहिर, मलान, क्रिस लिन, रासिद खान, मुजीव उर रहमान रहेका छन् । यसका साथै घरेलु क्रिकेटमा बाबर अजाम लगायतका चर्चित अनुहार यो श्रेणीमा परेका छन। […]
December 11, 2020 adminLeaveaComment on पारस खड्कालाई कोरोना संक्रमण
नेपाली क्रिकेटका पूर्व कप्तान तथा अलराउन्डर पारस खड्कालाई कोरोना संक्रमण भएको छ। उनले आफूलाई संक्रमण भएको ट्वीटर मार्फत जानकारी गराएका हुन्। दुई दिनदेखि आफूमा कोरोनाका लक्षणहरू देखिएपछि आइसोलेसनमा बसेको बताएका छन्। उनको बिहीबार साँझबाट स्वाद र गन्ध समेत हराएको बताएका छन्। हाल उनी होम आइसोलेसनमा छन्। उनले शुक्रबार बिहान कोरोना परीक्षण गराएका थिए।कोरोना भएसँगै उनले शनिबारबाट चितवनमा हुने […]